ओप्पाे माेबाइलकाे मूल्य घट्याे – Makalukhabar.com
मकालु खबर	 २०७७ पुष २३ १४:२८ मा प्रकाशित 85
काठमाडाैं । प्राविधिक ब्राण्ड ओपोले केही समय अगाडी मात्र सार्वजनिक गरेको ह्याण्डसेट ओपो ए१२ ३जीबीलाई नयाँ आकर्षक मूल्यमा उपलब्ध गराएको छ । पहिले रु. १८ हजार ५ सय ९० मूल्य रहेको उक्त फोनमा रु १ हजार कटौतीका साथमा अब कम्पनीले रु. १७ हजार ५ सय ९०मा उपलब्ध गराएको हो ।
नेपाली बजारमा उक्त फोन कालो र नीलो गरी दुई रङमा उपलब्ध छ । सन् २०२०को अगास्ट महिनामा सार्वजनिक उक्त फोनको चौडाइ ८.३एमएम र वजन जम्मा १ सय ६५ ग्राम रहेको छ ।